Soosaarayaasha Warshadaha Glass Latch Glass iyo Warshadaha - Warshadaha Glass Latch Glass
Qalabka birta waa geedi socod casri ah oo leh xididdadi hore. Nidaamka kabka birta, qaababka biraha waxaa lagu sameystaa iyadoo lagu shubo birta naxaas galay daloolka caaryada, halkaas oo lagu qaboojiyo ka dibna laga soo saaro caaryada. Qalabka lagu tuuro birta ayaa si muuqata loogu doodi karaa geedi socodka warshadaha ugu horreeyay uguna saamaynta badnaa taariikhda. Waxay u samayn jirtay waxyaabo badan oo bir ah oo loo isticmaalo nolosheena maalinlaha ah: qaybo otomaatig ah, giraangiraha tareenka, laambadaha laambada, basaska iskuulka, iyo waxyaabo kaloo badan. Intaas waxaa sii dheer, aasaaska birta wax lagu dhejiyo waxay ku tiirsan tahay dib-u-warshadaynta birta sida il qaali u ah ee alaabta ceyriinka ah, iyadoo si weyn hoos loogu dhigayo birta duugtay ee ku dhammaan kara qashin-qubka.